Tirakoobka 2014 iyo Isbedelada Ganacsi ee Baraha Bulshada | Martech Zone
Tirakoobka 2014 iyo Isbedelada Ganacsi ee Warbaahinta Bulshada
Arbacada, Oktoobar 1, 2014 Talaado, September 1, 2015 Douglas Karr
Warbaahinta bulshada meelna uma socoto, ganacsataduna hadda waxay ogaadeen in haddii ay doonayaan inay gaaraan himilooyinkooda iyo macaamiishooda, joogitaankooda khadka tooska ah ee warbaahinta bulshada ay aasaas u tahay istiraatiijiyadooda guud ee suuqgeynta. Faahfaahintan ayaa ah muuqaal qoto-dheer oo qoto-dheer, oo ay ka heleen warshadaha, dhexdhexaadka, iyo kanaalka bulshada, oo ku saabsan sida ganacsiyada ay uga faa'iideysanayaan warbaahinta bulshada inay ula xiriiraan macaamiisha.
Ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweynba waxay garwaaqsadaan saamaynta ay ku leeyihiin saamaynta baraha bulshada rayiga dadweynaha. Layaab malahan markaa shirkadaha in ay raadiyaan kuwan raad ku leh bogagga kala duwan ee warbaahinta bulshada una soo diraan muunado wax soo saar bilaash ah si ay dib ugu eegaan. Xogta soo socota, Ganacsiyada Warbaahinta Bulshada - Tirakoobka iyo Isbeddellada, Go-Gulf waxay soo bandhigeysaa dhowr stats iyo isbeddello muujinaya sida ganacsiyada ay u adeegsadaan warbaahinta bulshada si ay u wadaan kobaca ganacsiga.
Tags: b2b warbaahinta bulshadadareenka ganacsigatirakoobka warbaahinta bulshadadhimiskorsashada ganacsiga facebookkorsashada google +imisa daqiiqo maalintiikorsashada ganacsiga instagrammagacyada raaxadawarbaahinta bulshada ee wareegakorsashada ganacsiga pinterestdallacaadahasababaha loo raaco sumadaha warbaahinta bulshadasmb warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshadadhimista baraha bulshadadallacsiinta baraha bulshadatirakoobka iibsiga warbaahinta bulshadadareenka warbaahinta bulshadanoocyada warbaahinta bulshada ee waxyaabaha ku jiratirakoobka isku xirka bulshadakorsashada ganacsiga twitterdhaqanka iibsiga twitter
Oktoobar 2, 2014 at 8:00 AM
Jacaylka sawirka! La wadaagida kuwa raacsan hada! Baraha bulshada ayaa maanta si weyn looga isticmaalaa, laakiin wali waxaan la yaabanahay imisa ayaa u sameeya qaab qaldan. Waa muhiim oo si fiican uga shaqee waqtigooda inay sameeyaan xoogaa cilmi baaris ah oo ay wax u akhriyaan suuqgeynta warbaahinta bulshada si loo hubiyo in si sax ah loo qabtay!
Oktoobar 2, 2014 at 11:11 AM
Mahadsanid Brandon! Si xushmad leh - ma hubo habka "saxda ah" ama "khaldan" ee loogu isticmaalo warbaahinta bulshada shirkad ahaan. Waxaan arkaa qaar kaliya oo xayeysiis ah oo tweet ah iyo qiimo dhimis - laakiin waxay helayaan heerar madax furasho oo aad u wanaagsan markaa yaan aniga xukumayaa Waxaan u maleynayaa in shirkad kastaa u baahan tahay inay tijaabiso oo ay aragto waxa u shaqeynaya iyaga iyo dhagaystayaashooda.
24, 2014 at 6: 46 AM
Matalaadaada sawirka waa mid laga naxo runtiina waxbadan ayaan ka bartay tan. SIDII SAHAL LOOGU SAMEEYAY! Shaqaale weyn
Jan 22, 2015 saacadu markay ahayd 2:50 PM
kani waa bog cajiiba. dhaafsiisan waxtar, mahadsanid
Febraayo 20, 2015 saacadu markay tahay 10: 36 AM
Kuuboonada bulshada waxay xoojinayaan khiyaanada ah in daacadnimada sumcadda lagu dhiso dhimis. Si fudud waa qaab ku meelgaar ah loo kordhiyo iibka.
Feb 20, 2015 markay ahayd 12:42 PM
Ma ogi inaan gebi ahaanba oggolahay. Haddii macaamiishaadu ogaadaan inay jirto dhiirigelin inay waqti dheer kugula sii socdaan, badanaa way kula dhegi doonaan. Shirkadaha badankood waxay sameeyaan wax ka soo horjeeda. Waxay u dhimaan macaamiisha cusub ka dibna kor u qaadaan macaamiisha hadda jira… taas oo dhiirrigelisa wareejinta halkii.
Macluumaad weyn oo leh garaafka macluumaadka. Waxaan la wadaagi doonaa macaamiisha ku saabsan barxadda xoogga leh ee warbaahinta bulshada. Waad ku mahadsan tahay bixinta!
Runtii waa waxtar! Haddii aadan dhib u arkin, miyaan u adeegsan karaa tan sawir-gacmeedkayga? (Waxaan ahay arday dhigta iskuulka qaabeynta)
Waa inaad la xiriirtaa shirkadda asalka ah ee naqshadeynta ee loo yaqaan 'infographic', Roxie. Dhamaan wanaag.
Maanta, warbaahinta bulshada ayaa noqotay mashiin kale oo wax raadin ah halkaas oo dadka isticmaala ay dhab ahaantii raadinayaan faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan alaabada ama adeegga. Xitaa Noocyada Waaweyn ayaa sidoo kale diiradda saaraya sidii loo hagaajin lahaa joogitaankooda internetka ee Warbaahinta Bulshada.